Tartan - Warka iPhone | Wararka IPhone (Bogga 2)
Samsung Galaxy Watch 4 -ta cusub lama jaanqaadi doonto macruufka maadaama ay u baahan tahay in adeegyada Google ay dhaqaajiyaan oo shaqeeyaan.
dhagaha dhegaha ee B&O ee dhegaha ku jira ayaa ka sarreeya Apple AirPods Pro. Iyo waliba qiimaha.
Nuqul ka mid ah teknolojiyadda Apple ee 'MagSafe ’waxay qaadatay wax ka yar hal sano inay ku gaarto Android waxayna ka sameysay gacanta Realme.
Xiaomi wuxuu noqday rubuca labaad ee 2021, soo saaraha casriga ee labaad, wuxuu ka sarreeyaa Apple oo ku dhacda booska saddexaad
Bisha Ogosto 11keeda, shirkadda reer Kuuriya ee Samsung ayaa soo bandhigi doonta noocyadeeda cusub ee taleefannada casriga ah ee laabma 2021 marka lagu daro cusbooneysiinta saacadaha casriga ah.
UK Apple Ultimatum: Waxaa Lagu Waayayaa Xukunka 'Ganacsi ahaan Lama Aqbali Karo'
Dacwad u dhaxeysa Apple iyo Optis Cellular Technology oo ku saabsan lahaanshaha tikniyoolajiyadda iphone ayaa ka dhigaysa Apple inay ku hanjabeyso inay dalka ka baaba’ayso.
Apple waxay soo jeedinaysaa in Microsoft ay ka dambayso dacwada Epic
Apple waxay tilmaamaysaa in ka dambeeya dacwadda ka dhanka ah Epic ee ka dhanka ah Apple ay tahay Microsoft
Tufaaxu wuxuu yareeyaa soosaarka AirPods maadaama dalabku hoos udhaco
Apple waxay yareysay wax soo saarka kumbuyuutarka ee AirPods sababo la xiriira koror badan maadaama iibku hoos u dhacay sababo la xiriira kororka
Barxadda barnaamijka 'Podcast subscription podcast platform' waxay ka qaadi doontaa 5% guddi sannadka labaad
Barmaamijka cusub ee barnaamijka 'Podcast' ee 'Podcast platform' ayaa si rasmi ah u shaaciyay qorshayaasheeda ku wajahan waxyaabaha ay daabacayaan si ay awood ugu yeeshaan inay lacag ka sameystaan ​​barnaamijyadooda.
Nooca xiga ee Android, lambarka 12, wuxuu isku-dari doonaa isla ogeysiiska marin-u-helidda isla arji kasta
Smartwatch-ka ugu horreeya ee Google wuxuu yeelan doonaa naqshad wareegsan
Wararkii ugu dambeeyay ee la xiriira Pixel Watch waxay soo jeedinayaan inay imaan karto bisha Oktoobar ayna yeelan doonto naqshad wareeg ah.
Apple waxay sharraxaysaa in ku darista adeegga iMessage aaladaha Android ay iyaga u xun tahay
LG wuxuu ku dhawaaqay inuu ka baxayo suuqa casriga
LG ayaa ku dhawaaqday in ay si rasmi ah uga tagi doonto qaybta casriga ee sanadkan.
Cortana si rasmi ah ayaa looga saaray qalabyada IOS iyo Android. Ugu dambayntii maalintii sagootintu way timid
Apple wuxuu kordhiyaa liiska qalabka loo aqbalay sarrifka wuxuuna ku darayaa aaladaha Samsung iyo Google cusub.
iPhone 12 Pro Max vs OnePlus 9 Pro: Waxqabadka, Batariga, Astaamaha iyo Inbadan
Samsung iyo Apple waxay xukumayeen dhamaadka telefoonka tan iyo markii taleefannada casriga ay bilaabeen inay xukumaan ...
OnePlus wuxuu soo bandhigayaa smartwatch-kiisii ​​ugu horreeyay: 2 toddobaad oo batari ah iyo 159 euro
OnePlus ayaa ku dhawaaqday sharadkeedii ugu horreeyay ee ku saabsan smartwatches oo ay la leedahay OnePlus Watch, taleefan casri ah oo leh 2 toddobaad toddobaad ah iyo 159 euro.
Samsung ayaa joojisay Galaxy Note sababo la xiriira qayb ka mid ah
Qaybaha la'aanta ayaa bilaabay inay kudhacaan qorshayaasha mustaqbalka ee Samsung ee sanadkan waxayna saameyn ku yeelan kartaa dhammaan warshadaha, oo ay ku jiraan Apple.
Shirkada Kuuriyaanka ah ee LG ayaa ka fiirsaneysa inay gebi ahaanba ka baxdo suuqa taleefannada casriga ah.
Waxaan is barbardhigi doonnaa dhammaan Apple iPhone 12 iyo dhammaan Samsung Galaxy S21 oo aan aragno waxa ay ku kala duwan yihiin.
Intel wuxuu ku dhawaaqay "RealSense ID" inuu bedel u yahay Apple's Face ID
Intel wuxuu ku dhawaaqay "RealSense ID" inuu bedel u yahay Apple's Face ID. Nidaamka aqoonsiga wajiga ayaa lagu raadjoogay kii uu adeegsaday Apple tan iyo 2017.
Janaayo 14, Galaxy S21 ayaa si rasmi ah loo soo bandhigay
Samsung ayaa fiidiyow ku xaqiijisay in bisha Janaayo 14 ay si rasmi ah u soo bandhigi doonto Galaxy S21-ka cusub
Apple waxay si kumeelgaar ah u joojineysaa dacwad ka dhan ah Prepear sababo la mid ah astaanta
Waxay u muuqataa in Cupertino ay aqoontu iyaga dhex gashay oo ay doonayaan inay heshiis la gaaraan shirkadda Prepear si ay u adeegsadaan astaan ​​la mid ah tufaaxa Apple.
Samsung waxay tirtirtaa boostada meeshii ay ku jees jeesay saarista xeedho ee iPhone 12
Samsung waxay tirtirtaa boostada meeshii ay ku jees jeesay saarista xeedho ee iPhone 12. Malaha maxaa yeelay iyagana sidoo kale waxay sameynayaan wax la mid ah?
Samsung sidoo kale way samayn lahayd iyada oo aan lahayn xeedho iyo sameecado
Wararkii ugu dambeeyay ee la xiriira Samsung waxay muujinayaan inaysan ku soo darin xeedho iyo dhagaha taleefannada moodeellada soo socda.
Ahaanshaha mashiinka raadinta asalka ah ee macruufka waxay ku kacdaa Google inta udhaxeysa 8 iyo 12 bilyan sanadkii
Google mar dambe ma noqon karto mashiinka raadinta asalka ah ee aaladaha iOS haddii dacwadda ka dhanka ah hanti-goosadka ee laga gudbiyey Mareykanka ay guuleysato.
Samsung waxay ku jees jeesaysaa in Apple aysan ku sii darin fiijaha ku jira iphone-keeda
Laga soo bilaabo Samsung waxay rabeen inay ku noqdaan dagaalkii magacyada waana ay ka faa'iideysanayaan muranka xeedho ee iPhone 12 cusub.
Caawiye Google wuxuu awoodaa inuu aqoonsado heesaha markaan foorinno ama yeerno
Sawirradii ugu horreeyay ee barnaamijka 'Spotify widget' ee iOS 14
Qalabka 'Spotify' ee loo yaqaan 'iOS 14', ayaa horeyba loogu heli karaa dadka isticmaala qaarkood inkasta oo ay ugu wacan tahay xayiraadaha Apple, ma ahan wax ka faa'iideysan
Samsung Card oo hadda laga heli karo Boqortooyada Midowday (UK)
Samsung Apple Card, oo loogu magac daray Samsung Card, ayaa hadda laga heli karaa Yurub, iyadoo Boqortooyada Ingiriiska ay tahay dalkii ugu horreeyay ee ku raaxeysta.
Android iPhone SE waxaa lagu magacaabaa Pixel 4a wuxuuna ku kacayaa 389 euro
Google waxay soo bandhigtay Pixel 4a, nooca dhaqaalaha ee Pixel range sanadkaan oo leh qaabab heer sare ah oo heer sare ah.
Microsoft waxay sii wadaa inay Cortana ka saarto aaladaha moobaylka iyo kuwa ku hadla
Kaaliyaha kumbuyuutarka ee Microsoft, Cortana, wuxuu qayb ka noqon doonaa Microsoft 365 (jir Office 365), isagoo ka tagaya joogitaankiisa mobilada iyo kuwa ku hadla
Shirkadda Huawei ayaa kala wareegtay shirkadda Samsung markii ugu horreysay iyada oo ah shirkadda ugu weyn adduunka ee iibisa taleefannada casriga ah
Xiritaanka ay sababtay coronavirus-ka adduunka intiisa badan, Huawei wuxuu noqday kan ugu weyn adduunka ee iibiya taleefannada casriga ah.
Microsoft waxay ku dhawaaqday xiritaanka joogtada ah ee inta badan dukaamada jirka
Microsoft waxay ku dhawaaqday inay xireyso ficil ahaan dukaamadii jireed ee ay ku laheyd Mareykanka, Ingiriiska iyo Australia.
Android Auto mar hore ayuu ka shaqeeyaa Spain iyada oo aan loo baahnayn in lagu xiro taleefanka casriga ah xarig. Waxay ka shaqeysaa halkan iyo 18 dal oo kale.
Microsoft waxay u joojisay shirkii horumariyaheeda coronavirus darteed
Microsoft ayaa ku dhawaaqday in shirkii horumarinta ee la qaban lahaa sanad walba bisha May la baajiyay coronavirus darteed
Huawei wuxuu ku toogtaa iPad Pro qalabkiisa MatePad Pro 5G
Huawei wuxuu ku toogtaa iPad Pro qalabkiisa MatePad Pro 5G. Kaliya banaanka, maadaama shirkadeeda Huawei firmware ay sanado fudud ka fogtahay iPadOS.
Samsung AirDrop waxay u oggolaaneysaa wadaagista nuxurka ilaa 5 aalado isku mar
Muuqaalka Samsung ee kuu oggolaanaya inaad u dirto waxyaabaha ku jira aalado kale, oo la mid ah AirDrop, ayaa kuu oggolaanaya inaad u dirto waxyaabaha isku mar ah illaa 5 aalad.
Muhiim, Andy Rubin, si hufan hoos ugu dhiga indhoolaha
Muddo dhowr sano ah ka dib oo aan soo bandhigin war, iyo ka dib markii lagu dhawaaqay ku guuldareysiga GEM Muhiimka ah, shirkadda Andy Rubin ayaa albaabada loo laabay
Galaxy S20 iyo Galaxy Z Flip waa sharad cusub oo Samsung ah sanadka 2020
Sharadka cusub ee Samsung sanadka 2020 wuxuu ka kooban yahay Galaxy S20 iyo Galaxy Z Flip. Waxaan kuu sheegeynaa wax kasta oo aad uga baahan tahay inaad ka ogaato Samsung-da cusub ee heer sare ah
Samsung's Galaxy Buds + wuxuu la jaan qaadayaa iPhone-ka
Jiilka labaad ee Galaxy Buds, ayaa la jaan qaadi doona iyada oo loo marayo codsi Apple iPhone ah, wax aan ku dhicin kii ugu horreeyay.
Ring ayaa markale lagu eedeeyay basaasid adiga iyo iibinta xogtaada ku saabsan Android
Shirkadda Ring oo ay iska leedahay shirkadda Amazon ayaa markale indhaha isha ku haysa duufaanta lagu eedeeyay basaasnimada ee barnaamijka Android.
Taleefannada casriga ah ee soo socda ayaa isticmaali kara iPhone 11-ka Ultra Wideband
Telefoonada Android ee soo socda ayaa isticmaali kara iPhone 11 Ultra Ultra Wideband ah. Si la mid ah Bluetooth, waxay si sax ah u cabirtaa masaafada u dhaxeysa laba qalab.
Technologies-ka khiyaaliga ah ayaa ku dhawaaqay heshiis cusub oo lala galay shirkadda Apple
3 sano ka dib markii uu ku dhawaaqay joojinta xiriirka la leh Teknolojiyada Khiyaaliga ah, Apple waxay mar kale ku tiirsan tahay shirkadan inay adeegsato farsamada casriga ah.
IPhone kaamerada sameeyaha Sony ma sii wadi karto baahida sare
Sony ma aysan helin saadaalin dalab ku filan oo loogu talagalay qaybaha kamaradaha ee taleefannada casriga ah waxayna la kulantaa dhibaatooyin xagga saadka ah
Kani waa Huawei "iPad Pro", MatePad Pro waa rasmi
Huawei wuxuu soo bandhigay iPad Pro-keeda gaarka ah Haa, waa kiniin leh naqshad si rasmi ah loogu raad raacay iPad Pro
Microsoft waxay dib u dhigeysaa soo bandhigida Surb EarBuds illaa 2020
Maamulaha wax soo saarka Microsoft ayaa ku dhawaaqay in Surb Earbuds uusan ugu dambeyn imaan doonin ilaa horaanta sanadka soo socda.
Sonos waxay na siisaa qiimo dhimis dhan 30% haddii aan cusbooneysiino mid ka mid ah badeecadooda
Soo saaraha Sonos, oo caanku qarxay tan iyo markii Apple lagu dhawaaqay HomePod, ...
Fikrad ka timid Samsung lafteeda oo la filayo inay beddeli doonto Samsung-ka hadda jira ...
Ugu dambayn Samsung waxay qarinaysaa qaladka halista ah ee akhristaha faraha
Samsung ayaa hadda soo saartay balastar si ay u xalliso dhibaatadii halista ahayd ee ay ku qabeen dareemaha faraha ee Galaxy S10
Google wuxuu soo bandhigayaa kuwa cusub ee iPhone, MacBook iyo Airpods
Google ayaa maanta soo bandhigtay tartamayaasha cusub ee iPhone, MacBook iyo Airpods: Pixel 4, Pixel 4 XL, Pixelbuds 2 iyo Pixelbook Go.
Microsoft waxay dib ugu noqotaa taleefannada casriga ah oo leh Surface Duo: laba shaashad oo ay maamusho Android
Surface Duo waa sharadka Microsoft ee ku noqoshada suuqa taleefanka, in kasta oo markan ay doorteen Android, halkii ay ka heli lahayd Windows version qalabka ARM
Google ee Apple Arcade, Play Pass, ayaa hadda laga heli karaa Mareykanka $ 4,99 bishiiba
Google Play Pass, Andriod's Apple Arcade, ayaa hadda laga heli karaa dalka Mareykanka, waxayna na siineysaa kala duwanaansho muuqda oo ku saabsan adeegga rukunka ee Apple.
Shirkadda Kuuriya ayaa si rasmi ah u xaqiijisay goorta la soo saari doono Samsung Galaxy Fold ee Yurub. Waxay imaan doontaa Spain bartamaha bisha Oktoobar.
Disney + waxay soo bandhigi doontaa 4 aalado isku mar ah, iyo nuxurka 4K oo ah $ 6.99 bishiiba
Wiilasha Disney waxay daaha ka rogaan sida Disney + adeeggooda fiidiyowga ee qulqulka u noqon doona: illaa 4 aaladood oo leh nuxur 4K ah $ 6.99 bishiiba.
Ragga ka tirsan shirkadda Huawei ayaa mar kale dib u dhigaya furitaanka labanlaabka Mate X iyaga oo aan bixin wax sharraxaad ah, laakiin ka fogaanaya jeesjeeska Samsung.
Samsung waxay tirtireysaa xayeysiinta lagu dhaleeceynayo maqnaanshaha taleefanka taleefanka ee iPhone-ka
Shirkadda Kuuriya ayaa meesha ka saartay dhammaan xayeysiisyada YouTube-ka ee lagu cambaareynayay iPhone-ka oo aanu ku jirin qalabka dhegaha la galiyo
Ragga ku jira Fitbit waxay ku jiri doonaan xarig adag oo ka socda suuqa smartwatch iyagoo uruurinaya qasaaraha 27% sanadkiiba, qayb ahaan, Apple Watch.
Jiilka soo socda ee kala duwanaanshaha Note-ka, Xusuusin 10, ayaa noqon doona terminal-dhamaadka ugu horeeya ee ugu sareeya shirkadda Korea ee Samsung si ay uga baxsato qalabka dhegaha lagu xidho.
Ragga ka socda Microsoft waxay bilaabeen ganacsi cusub iyagoo wata Mackenzie madadaalo ah, Mac oo loogu talo galay asxaabta, iyaga oo dayacaya Apple's Mac Book.
Sidaan soo sheegnay, Netflix waxay ka bilaawday India qorshaheeda cusub, qorshe cusub oo ka raqiisan kaas oo loogu talagay in lagu cuno waxyaabaha ku jira aaladaha mobilada.
Muranku wuxuu galaa ragga ka socda Google markii la ogyahay in wada hadalada laga duubay Kaaliyaha Google la sifeyn lahaa.
Maaha wax qarsoodi ah qofna ama maahan inay shirkaduhu quudiyaan xogtayada mararka qaarkood. Amazon waxay si rasmi ah u xaqiijineysaa.
Apple waxay siisay Samsung $ 683 milyan ka dib markii uu buuxin waayey bartilmaameedyadii iibka ee loogu talagalay iPhone X
Android AirDorp wuxuu ka imaan doonaa gacanta Android Q waxaana lagu magacaabaa Fast Share, wuxuuna noo ogolaanayaa inaan qabano shaqooyin la mid ah AirDrop
Google ayaa si rasmi ah uga baxday suuqa kiniinka
Google waxay ku xaqiijisay iyada oo loo marayo Computer World inay ka tanaasushay tartankii ay kula jirtay Apple iyo Samsung suuqa kiniiniyada
Shazam wuxuu horey u ogolaaday in lagu garto heesaha iyadoo la adeegsanayo sameecadaha dhagaha, in kastoo hada kaliya laga isticmaalo Android
Shazam wuxuu noqday, dhowr sano ka hor, dalabkii ugu fiicnaa ee lagu ogaan karo heesaha ka dhawaajinaya hareerahayaga ...
Amazon waxay xubin cusub ku kordhisay qoyskeeda Echo Show 5
Amazon waxay soo bandhigtay xubinta cusub ee ugu cusub Echo qoyskeeda, Echo Show 5.
YouTube Premium hadda waa loo heli karaa ardayda Isbaanishka ku nool
YouTube Premium waa adeegga rukunka ee YouTube-ka lagu bixiyo si loogu raaxeysto dhammaan waxyaabaha ku jira xayeysiis la'aan, soo dejiso ...
ARM ayaa daboolka saareysa naxashka Huawei
Shirkadda Ingiriiska ah ee ARM ayaa ku dhawaaqday inay joojineyso la shaqeynta shirkadda Huawei, sidaas darteed aysan awood u yeelan doonin inay adeegsato qalabkeeda Kirin ee qaab dhismeedka ARM.
Huawei wuxuu ka dhammaanayaa cusbooneysiinta Android iyo Google Play Store
Google ayaa hadda ku soo rogtay torpedo a shirkadda biyaha ee Huawei, maadaama ay hadda uun shaacisay inay ka tagayso ...
Maxkamadda Sare ee Mareykanka ayaa qiratay dacwadda ka dhanka ah App Store, Apple-na way ka jawaabtay
Apple waligeed aad ayey uga maseyrsanayd App Store-keeda. Xaqiiqda ah inay maamusho waxa ku jira ...
Disney waxay si buuxda gacanta ugu dhigtaa Hulu
Dhowr bilood oo wadahadal ah kadib, Disney waxay ku guuleysatay inay si buuxda ula wareegto Hulu, inkasta oo ay tahay inay sugto illaa 2024 si ay sidaas u sameyso.
Android Q wuxuu nuqul ka bixiyaa tilmaamaha hal-abuurka leh ee aan ku haysanno iPhone-ka oo wata iOS
Ragga ka socda Google waxay soo bandhigaan Android Q cusub oo ay ku minguuriyaan dhammaan tilmaamaha aan ku leenahay macruufka si loo dhaqaajiyo loona xiro codsiyada ...
Samsung waxay kansal gareeysaa Galaxy Fold, illaa macaamiisha ay dhab ahaan doonayaan
Samsung Galaxy Fold ayaa ku socota wadadii uu u noqon lahaa mobilada keenay warar dheeraad ah iyadoo aan xitaa ...
Netflix wuxuu ku dhawaaqayaa cod tayo sare leh adeegiisa
Netflix, waa adeegga ugu caansan adduunka ee adeegga fiidiyowga-dalbashada, had iyo jeer waa la cusbooneysiiyaa markay tahay ...
Spotify ayaa kaliya ku dhawaaqday natiijooyinkeeda maaliyadeed rubucii ugu horreeyay ee maaliyadeed ee 2019 ee dhammaaday Maarso 31, iyo ...
iFixit wuxuu la baxayaa jeexjeexa Galaxy Fold markii uu codsaday Samsung
Taleefanka cusub ee Samsung, Samsung Galaxy Fold, wuxuu siinayaa waxyaabo badan oo looga hadlo, wanaag iyo xumaanba….
Samsung waxaa lagu qasbay inay dib u dhigto soosaarka Galaxy Fold
Samsung ayaa lagu qasbay inay dib u dhigto munaasabadda bandhigga Galaxy Fold ee adduunka oo dhan sababtoo ah dhibaatooyinka lagu arkay dib u eegista ugu horreysa
Samsung Galaxy Fold ayaa ka fiicnaan kara Note 7 fiasco
Ka dib markii 48 saacadood oo keliya la isticmaalay, Samsung Galaxy Fold oo gacanta ugu jira dhowr bloggers iyo youtubers ayaa dhibaatooyin culus ku soo bandhigay shaashadda.
Amazon waxay lahaan doontaa adeeg daadihinta muusikada oo bilaash ah
Amazon waxay ka been sheegtay inay la tartameyso tikniyoolajiyad weyn maadaama hal shirkad oo dheeri ah ay isha ku heyso ...
Dareenta faraha S10 waxaa lagu siri karaa makiinad 3D ah
Amniga sawirka faraha ee S10 ee uu naqshadeeyay Qualcomm way fududahay in lagu dhaafo sawirka faraha biometric-ka ee cusbi.
Amazon waxay dooneysaa dhagaha sameecadaha Alexa si ay ula tartamaan AirPods
Amazon ma rabto in looga tago suuqa loogu talagalay dhagaha dhagaha ee wireless, halkaas oo Apple's AirPods ay have ahaayeen
IPhone-ka 2019-ka wuxuu soo bandhigi karaa nidaam lacag-celin wireless-ka rogan ah
Sida laga soo xigtay falanqeeyaha Ming-Chi Kuo, Apple waxay baraneysaa suurtagalnimada in lagu daro nidaam lacag celin ah jiilka 2019 ee iPhone.
Ikea waxay muujineysaa sida dadka hadla ay u ahaan lahaayeen iskaashi ay la yeeshaan Sonos
Ikea, bakhaarka alaabta guryaha ee iswiidhishka, iyo Sonos, oo ah shirkadda qalabka maqalka, ayaa horeyba u shaaciyey wadashaqeyntooda inay keenaan ...
Apple Music waxaa lagu rakibay 40 milyan oo qalab Android ah
Adeegga qulqulka muusikada ee Apple waxaa laga heli karaa in ka badan 40 milyan oo qalab Android ah.
CFO-ga Huawei waxaa lagu qabtay Kanada, waxaa suuragal ah inuu wax badan ka ogyahay Apple-ka inta aan ka ognahay
Gabadha uu dhalay madaxweynaha Huawei, oo hadda ah shirkadda CFO, ayaa lagu xiray bishii Diseembar ee la soo dhaafay Kanada. Alaabtiisa waxaa ka mid ahaa badeecooyin kala duwan oo Apple ah.
Koogeek Alaabooyinka Guriga ee iibka ah ee Amazon
Soo ogow xulitaankan alaabada guriga Koogeek ee aan si ku meelgaar ah ugu helno qiimaha ugu fiican ee laga heli karo Amazon.
Android waxay khatar weyn ku tahay asturnaanta isticmaaleyaasheeda mahadnaqa barnaamijyada aan muuqan ee xitaa milkiilaha taleefanka uusan ka warqabin jiritaankooda
Apple waxay kaga jawaabtaa cabashooyinka Spotify qoraal
Maalin dhaweyd waxaan kuu sheegnay sida Spotify ay ugu gudubtay heerka xiga cabashooyinkooda, iyaga oo u soo gudbiyay Guddiga Yurub iyadoo ...
Alaabada ugu fiican Kogeek iyo dodocool ee lagu iibinayo Amazon
Raadinta fikradaha hadiyadaha ee Maalinta Aabbaha? Ka faa'iideyso dalabyada ku saabsan waxyaabaha ugu fiican ee Koogeek iyo alaabooyinka dodocool. Dalabyo gaar ah.
Tidal wuxuu horey kuu ogolaanayaa inaad ku soo saarto tayada Master-ka ee iPhone
Tidal, adeegga muusigga qulqulka ah ee loo yaqaan 'Tidal HiFi' ikhtiyaar ikhtiyaari ah oo noo oggolaanaya ...
Spotify waxay heshiis la gaadhay Samsung in barnaamijkeeda horay loogu sii rakibay S10-ka cusub
Ragga ku jira Spotify waxay qandaraas qaas ah la galaan Samsung si S10-yada cusub ay u helaan barnaamijka adeegga muusikada qulqulka horay loogu rakibay.
Disney + waxay yeelan doontaa buugga Disney oo dhan iyo gaar ahaan
Disney + wuxuu noqon doonaa fiidiyowga qulqulaya Disney ee ku saabsan adeegga dalabka ee la soo bandhigi doono ...
Waxaan horeyba u haysanay tijaabooyinka waxqabadka inta udhaxeysa iPhone XS Max iyo Samsung Galaxy S10 +
Qaabka cusub ee Samsung ee kala duwan ee Galaxy, S10 oo leh noocyadiisa kala duwan, ayaa mar horeba dhexdeenna ah, sida as
Sicir-dhimista ugu wanaagsan ee Koogeek iyo alaabooyinka dodocool ee Amazon
Raadi wax badan oo ku saabsan Koogeek iyo alaabooyinka dodocool ee aan ka heli karno qiimo dhimista ku-meel-gaarka ah ee Amazon.
Galaxy S10: dareeraha faraha oo gaabis ah, qosol aqoonsiga wajiga
Samsung waxay ku guuleysatay naqshad weyn oo leh Galaxy S10 +, laakiin qiimaha nidaamka amniga ee su'aasha ku jira
Xiaomi mar kale ayey sameysay, waxay soo guuriyeen sawir-qaadayaasha firfircoon ee macOS Mojave
Xiaomi ayaa mar kale nuqul ka ah Apple. Haddii aysan ku filnayn inay nuqul ka dhigaan qaabeynta qalabka, hadda waxay ka soo guuriyeen asalka firfircoonida macOS Mojave.
iPhone XS Max vs Samsung Galaxy S10 +: tijaabada xawaaraha
Waxaan ku tusineynaa tijaabo xawaare cusub oo aan ku aragno sida labada Galaxy S10 + iyo iPhone XS Max ay noogu yaboohaan waxqabad isku mid ah.
Beddelka Huawei ee Galaxy Fold waxaa loo yaqaan 'Mate X' waana ka kharash badan yahay
4 maalmood ka dib markii la bilaabay Galaxy Fold, shirkadda Aasiya ee Huawei ayaa soo bandhigtay Mate X, oo ah shirkaddii ugu horreysay ee taleefanka gacanta isku laaban.
Samsung waxay ku dari doontaa cabbiraadda dhiig karkeeda cusub ee Galaxy Watch Active
Smartwatches, gaar ahaan wixii ka dambeeyay Apple Watch, waxay diiradda saarayaan la socodka caafimaadka iyo jimicsiga ...
Soo ogow qiimo dhimista ugu wanaagsan ee laga heli karo Amazon xulashada Koogeek iyo alaabada dodocool ee si ku meelgaar ah loogu heli karo iib ahaan.
Qiimo-dhimista ku saabsan Koogeek iyo alaabooyinka dodocool ee Amazon
Soo ogow qiimo dhimista aan ka helno Amazon xulashadan Koogeek iyo alaabooyinka dodocool si kumeelgaar ah.
Ku guuleystaha tartanka "Sawir gacmeed lala galay OnePlus" ayaa ka xaday sawir ka mid ah DSLR barta Instagram
Been abuurka toogashada ee loo yaqaan 'Shot on OnePlus' ayaa la ogaaday: isticmaale ayaa sawir ka xaday barta Instagram waxaana lagu qaaday kamarad DSLR ah.
Sonos wuxuu ku dhawaaqayaa darbi cusub oo dadban, saqafka iyo kuwa ku hadla banaanka
Sonos, afhayeenka iyo shirkadda nidaamyada dhawaaqa, ayaa soo saaray alaabooyin cusub oo ku yaal California bishii Febraayo 5. Gudaha…
Qiima dhimista ugu wanaagsan ee alaabta guryaha Koogeek ee Amazon
Ka ogow waxbadan oo ku saabsan qiimo dhimista Koogeek iyo alaabada guryaha dodocool ee si ku meelgaar ah looga heli karo Amazon.
Facebook Research, waxaa laga saaray Facebook kadib markii ay ku lug yeelatay fadeexad kale
Facebook wuxuu tirtirayaa dalabkii Cilmi baarista ee sharci darrada ku soo aruurinayay xogta dadka isticmaala oo iyagana lacag ka qaadan lahaa
Apple ayaa ka jawaabeysa eedeymaha ku saabsan ku takri-fal awoodeed ee Kuuriyada Koonfureed
Maxkamadda tartanka ayaa dhageysatay eedeymaha Apple ee la xiriira cabashooyinka ay ka heshay howl wadeenada Kuuriya ee dalka ka howlgala.
Windows 10 Mobile, waa taariikh ku saabsan dhimashada la shaaciyey
Microsoft ayaa hadda si rasmi ah u shaacisay inay joojinayso taageerada ay siinayso cusboonaysiinta amniga ee Windows 10 Mobile illaa bisha Diseembar 2019.
Samsung, Intel iyo MediaTek si loo siiyo 5G Modem-ka illaa 2019 iPhones
Dagaalka sharciga ee u dhexeeya Qualcomm iyo Apple ayaa ku qasbay shirkadda Tim Cook in ay isku daydo in ay hesho 5G modem-bixiyeyaal dheeri ah oo loogu talagalay jiilka cusub ee iPhones.
Samsung Galaxy S10 waxaa lagu soo bandhigi doonaa bisha Febraayo 20 magaalada San Francisco
Samsung waxay soo bandhigi doontaa Galaxy S10 bisha Febraayo 20, maalmo kahor MWC 2019 oo sanad walba ka dhaca magaalada Barcelona.
Xiaomi wuxuu ku adkeysanayaa inuu koobiyeeyo AirPods wuxuuna bilaabayaa AirDots Pro
Ka waran haddii aad ka shaqeysid Huawei oo aad ku soo qorto akoonkooda rasmiga ah iphone?
5 kamaradood miyaa lagama maarmaan u ah taleefanka casriga ah? Wixii Nokia 9 PureView waxay u muuqataa sidaas
Haddii aad leedahay Apple TV, iska ilow daawashada dhacdadii ugu dambaysay ee isdhexgalka ee Black Mirror ee Netflix
Netflix waxay xannibtay Apple TV markii ugu horreysay, iyadoo dhinac loo daayo haddii aan dooneyno inaan aragno filimka cusub ee Black Mirror: Bandersnatch, oo ah filimkii ugu horreeyay ee is-dhexgal ah.
Apple Music waxay dirtaa ogeysiis riix ah si ay noo xusuusiso in laga heli karo Amazon Echo
Ragga ka socda Cupertino waxay bilaabeen ogeysiisyo riixitaan ah oo ka digaya in Apple Music ay mar horeba la jaan qaadi karto Amazon Echo iyo Alexa cusub.
Google Pixel 3 wuxuu helayaa dhibco isku mid ah sida loo yaqaan 'iPhone XR' sida laga soo xigtay DxOMark
Google Pixel 3, ka dib markii uu ka gudbay tijaabooyinka DxOMark, wuxuu helay dhibco la mid ah tan Apple ee iPhone XR.
Samsung waxay bilaabaysaa inay ka tanaasusho isku xirnaanta taleefanka dhagaha iyadoo la bilaabayo A8s
Shirkadda laga leeyahay Kuuriya ee Samsung ayaa ka mid ahayd shirkadaha yar ee maanta sii wadaya hirgelinta xiriirka ...
Ragga ka socda Amazon waxay ku hawlgeliyaan geolocation dhammaan aaladaha leh Alexa si kaaliyaha uu ula falgalo meesha aan joogno.
Shirkadda Microsoft ayaa soo bandhigtay xayeysiis cusub oo sheegaya in iPad-ku aanu ahayn kombuyuutar dhab ah
Xilliga ciidaha ayaa soo socda oo dagaallo ay noqonayaan qalabka ugu iibinta badan ayaa ka socda YouTube-ka. Ugu dambeeyay…
Samsung waxay been abuurtaa saamaynta sawirka ee Galaxy A8 oo leh sawir DSLR ah
Isticmaalaha 'EyeEm' ayaa muujinaya in Samsung ay u isticmaashay sawiradeeda DSLR si kor loogu qaado qaabka sawirka ee Samsung Galaxy A8
Sawirka iPhone X kama badna sawirka Pocophone-ka
Haddii aad raacsan tahay shabakadaha Marques Brownlee (iyo kanaalkiisa YouTube-ka ee loo yaqaan 'MKBHD'), waad arki doontaa taas ...
Google waxay cusbooneysiineysaa shirkada mobilada Google Fi waxayna ka dhigeysaa mid la jaan qaadi kara iPhone-ka
Goortii qofna uusan fileynin, Google wuxuu cusbooneysiiyaa hawl wadeenkeeda moobiilka: waxaa loo beddelay Google Fi wuxuuna bilaabaa inuu isla fahmo iPhone-ka.
Logitech si aad u iibsato Plantronics, oo ah nooca sameecadaha dhagaha
Logitech, iibsigan, oo lagu xamanayo inuu ku dhow yahay 2.000 bilyan oo doolar, wuxuu geli lahaa suuqa madaxa.
Kaaliyaha Google wuxuu hadda ku shaqeeyaa dariiqa loo maro Siri
Google maanta waxay cusbooneysiisay kaaliyeheeda barnaamijkeeda iyo isdhexgalka iyada oo la adeegsanayo toobiyeyaasha. Toobiye ayaa kuu ogolaanaya inaad bilowdo kaaliyaha iyada oo loo marayo Siri.
IPhone-ka ayaa lumiyay saamigii suuqa ee Yurub iyo Jabbaan, iyadoo Spain ay tahay dalka Yurub halka ay aad ugu dhacday
Tirooyinkii ugu dambeeyay ee Kandar Worldpanel ayaa na tusaya sida Yurub, oo uu hoggaamiyo Spain, ay u doorbideyso Android-ka iOS.
Alexa ayaa hadda kaaga jawaabi doona adiga oo raacaya
Bishii la soo dhaafay Amazon ayaa ku dhawaaqday imaatinka Nidaamka Whisper (waswaaska ama dhawaqa), waxaana hadda laga helayaa Mareykanka.
Pixel 3 kuma garaacdo iPhone XS bartilmaameedyada
Pixel 3 iyo Pixel 3 XL oo leh Snapdragon 845 waxba kuma laha iPhone XS iyo iPhone XS Max oo leh A12 Bionic.
Microsoft waxay soo saartay alaab cusub oo dusha sare ah si la yaab leh
Soo bandhigiddu waxay ka dhigan tahay cusbooneysiin yar oo ka mid ah oogada oogada iyada oo aan wax weyn laga beddelin, marka laga reebo dhagaha dhagaha ee cusub
Tufaaxku wuu ku xasilan karaa tartanka Apple Watch, kani waa LG Watch W7 cusub ...
Ragga ku jira LG waxay bilaabeen LG Watch W7 cusub iyagoo ujeedkoodu yahay inay kala furtaan Apple Watch iyagoo badbaadinaya saacadaha analogga caadiga ah.
Shirkadda Aasiya ee Huawei ayaa siisay 200 bank bank oo ka mid ah dadka isticmaala ee rajada ka qaba inay la wareegaan iPhone XS iyo iPhone XS Max cusub ee Singapore
Fitbit wuxuu soo bandhigayaa Charge 3 waxqabadka raadraaca
Fitbit's bet cusub, Charge 3, wuxuu sheeganayaa inuu yahay jijin waxqabad ee ugu horumarsan waqtigaan mana ka maqnaado sababo.
Spotify wuxuu ku darayaa maktabadda BBC Podcast buuggeeda
Imaatinka Deutsche Grammophon ee Apple Music, Spotify wuxuu u dabaaldegayaa imaatinka dhammaan buugaagta BBC-da ee 'Podcast'.
Ciyaarta Fortnite waxay u timaadaa aaladaha Android si u gaar ah
Waxa u muuqda inay ugub ku tahay dadka isticmaala Android waxay ahayd sir qarsoon, taasina waa ...
Samsung Galaxy Tab S4 cusub wuxuu diiradda saarayaa wax soo saarka
Waqtigan xaadirka ah, shirkadaha kaliya ee bixiya kiniiniyada oo leh astaamo u dhigma kombiyuutarka suuqa waa Samsung iyo Apple. In kasta oo Samsung ay si rasmi ah u soo bandhigtay Galaxy Tab S4, oo ah kiniin ay ku rabto inay u noqoto beddel dhab ah iPad Pro iyada oo ay ugu wacan tahay wax soo saarka ay na siiso
Fiidiyowyo cusub oo Samsung ah oo kaftamaya iPhone-ka
Samsung ayaa mar kale weerartay YouTube, iyada oo daabacaysa fiidiyowyo badan oo ay "ingenius" ku dhaleeceyneyso iPhone, Apple iyo adeegsadayaasheeda
Samsung iyo Fortnite waxay la midoobeen Note 9
Fortnite waxaa loo bilaabi doonaa markii hore kaliya Galaxy Note 9, marka lagu daro waxay heli doonaan faa'iidooyin gaar ah sida maqaarka iyo kontaroolada gaarka ah.
Haddana Samsung waxay u baahan tahay inay ku jeesjeeso Apple si ay u hesho dareen
Tani ma aha markii ugu horreysay ee ay tani dhacdo oo waa in shirkadda Koonfurta Kuuriya ay dhaqankan ku fuliso ...
Surface Go-ka cusub ee Microsoft wuxuu doonayaa inuu noqdo bedelka iPad-ka
Shirkadda fadhigeedu yahay Redmon waxay soo bandhigtay 'Surface Go', oo lagu beddelan karo iPad-ka, oo leh nooc buuxa oo ah Windows 10
Samsung Galaxy S10 ayaa la imaan karay 3 kamaradood oo gadaal ah iyo labo hore
Wararkii ugu dambeeyay ee la xiriira Samsung Galaxy S10 waxay soo jeedinayaan inuu yeelan doono 5 kaamiro: 3 gadaal iyo 2 hore.
Samsung kama baxsato iibka liita ee S9
Marar badan ayaa wararka ku saabsan iibka xun ee qalabka mobilada iyo gaar ahaan dhamaadka iPhone ...
Telefoon casri ah oo leh shaashad isku laaban, tani waxay noqon kartaa casriga casriga ah ee Microsoft
Marka laga reebo inuu ka tago barnaamijyada moobiilka, Microsoft wuxuu sii wadaa inuu ku shaqeeyo taleefan casri ah oo wata shaashad isku laaban oo ay maamuli doonto Windows 10
Shirkadda Jeff Bezos waxay soo bandhigtay qalab cusub oo ay ku qabsato qolkaaga fadhiga. Tani waa Amazon Fire TV Cube. Waxaan kuu sheegayaa waxa ay ka kooban tahay.
Maaha wax la mid ah, waa nuqul sax ah ee iPhone X. Kani waa Xiaomi Mi 8
Fiiri sawirka kore oo ii sheeg inaadan arkeynin «dhammaan taleefannada iPhoneka ah ... Shaki kuma jiro inay shirkaddan ...
Google ayaa ku dhawaaqday in magaca loo beddelay Google Drive marka lagu daro ku darista qorshooyinka cusub ee keydinta
Adeegga keydinta ee Google, Google Drive, kaliya ma badali doono magaciisa bilaha soo socda, laakiin wuxuu sidoo kale ballaarin doonaa booska ay maanta bixiso.
Habka dahsoon waxaa laga yaabaa inuu dhab ka ahaado YouTube dhawaan
Waqtigan xaadirka ah, YouTube waxay tijaabineysaa hawl cusub oo ka dhex jirta arjiga loo yaqaan 'incognito mode', kaas oo noo oggolaanaya inaan si qarsoodi ah ugu baadho aaladdayada annaga oo aan ka tagin raad, sida loo maleynayo.
Microsoft waxay rabtaa Apple inay keento iMessage Windows
Afhayeen u hadlay Microsoft wuxuu sheegay inay fiicnaan laheyd dadka isticmaala Windows inay awood u yeeshaan inay ku raaxeystaan ​​barnaamijka fariimaha Apple ee kombiyuutarkooda.
Ugu dambeyntiina wararka xanta ah ee sheegaya in Google ay koobi karto astaamaha iPhone X, ayaa lagu xaqiijiyay Google I / O Google ay qabatay saacado ka hor.
Sida lagu muujiyey daraasad dhowaan la sameeyey, waxay kuxirantahay luuqada looga hadlo wadankaaga, dookhaaga ayaa uxilsaari doona Android ama ucaawin doona iOS
Barnaamijka Texture wuxuu joojin doonaa ka shaqeynta Windows, ka dib markii ay heshay Apple
Adeegga majaladda dhijitaalka ah ee Apple iibsatay dhowr bilood ka hor ayaa ku dhawaaqday in barnaamijka Windows-ka ah uu joogsan doono shaqada 30-ka Juun, oo ah taariikhda ay sidoo kale ka baaba'ayso keydka arjiga ee Microsoft
Pentagon wuxuu mamnuucayaa iibinta xarumaha Huawei iyo ZTE ee saldhigyadooda milatari
Pentagon-ka ayaa hadda ku dhawaaqay in dhammaan badeecadaha ay soo saareen Huawei iyo ZTE aysan awoodi doonin in lagu iibiyo saldhigyada milateri ee dowladda Mareykanku ku leedahay adduunka oo dhan.
Nokia waxay iibisaa qaybta caafimaadka ee ay ka iibsatay milkiilaha shirkadda Withings
Nokia ayaan si buuxda uga faa’iideysan qeybinta daryeelka caafimaad ee ay ka soo iibsatay shirkadda Withings laba sano ka hor, waxayna isku dayeysaa inay dib ugu celiso aasaasihiisii ​​hore.
Apple waxay isku dayeysaa inay ku qanciso dadka isticmaala Android inay u wareegaan iPhone iyagoo wata fiidiyowyo cusub
Apple wuxuu ku sii socdaa u beddelashada ololaha 'iPhone'. Waxayna ku sameysaa labo fiidiyow oo cusub oo waqti aad u gaaban ah oo lagu xoojiyay App Store iyo qaabka sawirka moodooyinka ugu dambeeyay
Ku dhawaaqida Huawei P20 oo ay saxiixi karto Apple
Shaki la'aan Huawei waa mid ka mid ah shirkadaha waawayn ee ka muuqda Apple si loo abuuro qalabkooda….
Fiidiyowyada muusikada ayaa sidoo kale u imanaya barnaamijka Apple Music ee loogu talagalay Android
Ragga ka socda Cupertino ayaa mar kale cusbooneysiiyay barnaamijka Apple Music ee loogu talagalay Android, iyagoo siinaya isla caan ku ah fiidiyowyada muusikada ee ay hadda ku leedahay iOS 11.3
OnePlus wuxuu aqoonsan yahay in Apple uu yahay midka hogaaminaya wadada
OnePlus wuxuu aqoonsan yahay in Apple ay si aad ah saameyn ugu yeelatay qaabeynta naqshadeeda cusub ee OnePlus 6, iyo in kuwa kale ee soo saarayaasha Android ay sidoo kale nuqul ka sameystaan
Shirkadda Spotify ayaa qiyaaseysa in dhamaadka sanadka ay yeelan doonto inta udhaxeysa 92 ilaa 96 milyan oo macaamiil ah
Qiyaasta Spotify ee tirada macaamiisha ayaa soo jeedinaysa in dhamaadka sanadka, shirkadu ay yeelan karto inta udhaxeysa 92 ilaa 96 milyan oo macaamiil ah.
Google inay ku weeraraan waxbarashada: Kiniin leh ChromeOS oo loogu talagalay fasallada
Google ayaa ka horaysay Apple waxayna soo bandhigtay Acer kiniinkii ugu horeeyay oo ay ku rakiban yihiin ChromeOS. Kani waa Acer Chromebook Tab 10
Fitbit waxay soo bandhigtay Fitbit Versa, oo ka duwan Apple Watch oo leh naqshad aad isugu eg bilic ahaan iyo marka loo eego howlaha Apple Watch ee wiilasha Cupertino.
Sida laga soo xigtay sahankii ugu dambeeyay, dadka isticmaala Android waxay daacad u yihiin barnaamijkooda marka loo eego macaamiisha macruufka, xogta sida gaarka ah u liidata sababo la xiriira xaddidaadkeeda.
Alexa macno ahaan wuu ku qoslaa dadka isticmaala
Dhowr isticmaale ayaa la yaabay qosol qosol badan oo ka yimid Amazon Alexa marka lagu daro inay arkeen sida kuwan ku hadla smart ay ula falgalaan iyaga oo aan ogolaansho.
Shaashadda Galaxy S9 ayaa hadda ah tan ugu fiican suuqa
Sida laga soo xigtay Display Mate, hadda shaashadda ugu fiican suuqa waxaa laga heli karaa Samsung Galaxy S9 oo dhowaan la soo bandhigay
Vivo waxay joogtaa MWC iyo Vivo APEX waxay tusaale fiican u noqon kartaa shirkadaha kale iyo kooxahooda mustaqbalka inay raacaan.
Samsung Galaxy S9 vs iPhone X, labada telefoon marka la barbar dhigo sawirrada
Samsung Galaxy S9 waxaa si rasmi ah loo soo bandhigay laba maalmood gudahood. Si kastaba ha noqotee, waxaa suurtagal noqotay in la isbarbardhigo iyada oo loo marayo sawirro leh iPhone X
IOS iyo Android waxay ku badan yihiin suuqa iyagoo haysta boqolkiiba 99,9%
Labada iOS ee Apple iyo Google ee Android labaduba waa kuwa hadda xukuma suuqa telefoonka, marka laga reebo 0,1% oo ay wadaagaan BlackBerry OS, Windows Phone iyo Tizen.
Google waxay bilaabeysaa Google Pay iyadoo ka jawaabeysa Apple Pay Cash
Ragga Google waxay go'aansadeen inay ku midoobaan Android Pay iyo Google Wallet si ay u bilaabaan Google Pay, oo ah barnaamijka cusub ee lagu bixiyo Android iyadoo la eegayo in meesha laga saaro Apple Pay.
Sida ku xusan fiidiyowga laga soo daayay is-dhexgalka adeegsadaha ee Xiaomi Mi Mix 2s, soo socota ee soo socota ee Xiaomi ayaa si xishood la'aan ah u nuqul ka ah istcimaalka isticmaalaha ee iPhone X marka la helayo hawlo badan.
Google iyo Nest ayaa mar kale isku milmay si ay u xukumaan guriga caqliga badan
Google iyo Nest ayaa mar kale wada shaqeyn doona si ay awood ugu yeeshaan inay ka shaqeeyaan xukunka guriga casriga ah. Waxay haddaba ka shaqeynayaan alaabooyin cusub waxayna awood u leeyihiin inay siiyaan xalal aad u soo jiidasho leh macaamiisha
Madaxweyne ku xigeenka Samsung ayaa laga sii daayay xabsiga ka dib markii uu dhameystay 5 bilood oo ka mid ah 5tii sano ee lagu xukumay
Madaxweyne ku xigeenka Samsung, oo bishii Ogosto ee la soo dhaafay lagu xukumay 5 sano oo xarig ah, ayaa la siidaayay kadib racfaankii ay soo bandhigeen qareenadiisa isla markaana laga sii daayay eedeymaha loo soo jeediyay.
Spotify waxay tijaabisaa barnaamij ku saabsan Android oo loo yaqaan "Stations"
Shirkadda Spotify ayaa tijaabineysa adeeg cusub oo ka socda Android oo lagu magacaabo Stations. Waa hab cusub oo lagu dhagaysto muusikada bilaashka ah
5ta Sababood ee HomePod uu dili doono Amazon Echo iyo Google Home - Iyo Sababaha aysan u Dili doonin
Waxaan falanqeyneynaa dhammaan fursadaha Apple HomePod cusub ee suuqa laga bilaabi doono Febraayo 9 marka laga soo horjeedo tartamayaasha ugu waaweyn: Google Home iyo Amazon Echo.
Disney waxay la soo wareegtay maareeyihii hore ee iTunes barnaamijkeeda socodka ee mustaqbalka
2018 waxay noqon doontaa sanadka aan ku aragno tiro aan dhammaad lahayn oo adeegsi muuqaal fiidiyoow ah oo koraya si ay u bilaabaan ...
UMIGIZI Z2, sawirro dhab ah oo ah sawir cusub oo iPhone X ah
Mid kale oo iPhone X ah ayaa ku socota jidka. Magaceedu waa UMIGIZI Z2 waxayna lahaan kartaa baytariga soconaya ilaa 3 maalmood isagoon marin xeedho
Soosaarka Galaxy X, Samsung oo ah shaashadda shaashadda isku laaban, ayaa bilaabmi doonta bisha Nofember
Soo-saarista taleefanka gacanta ee ugu horreeya oo leh shaashad isku laaban suuqa, Samsung's Galaxy X, ayaa bilaabi kara bisha Nofeembar ee sannadkan oo si rasmi ah u arki doonta iftiinka MWC 2019
Google Wallet iyo Android Pay waxay noqdaan Google Pay
Shirkadda raadinta ee Google ayaa hadda ku dhawaaqday mideynta labadeeda nidaam ee lacag bixinta moobaylka: Google Wallet iyo Android Pay, oo loo bixiyay Google Pay.
Samsung Galaxy S9 wuxuu yeelan doonaa astaamaha iPhone X-qaabka
Processor-ka cusub ee Samsung ee Exynos wuxuu ku darayaa astaamo aad u xasuusinaya iPhone X, wuxuuna dhawaan iman doonaa Galaxy S9.
Doogee V, mid kale oo ka mid ah iPhone X iyo akhristaha sawirka faraha shaashadda hoosteeda
Mid kale oo ka mid ah iPhone X ayaa la sifeeyey.
Apple wuxuu ku biirayaa daladda maqalka ee mas'uulka ka ah koodhadhka AV1 ee mustaqbalka
Apple wuxuu ku biirayaa Alliance for Open Media isagoo raadinaya koodhka AV1 si loo gaaro tayo sare iyo faylal fiidiyoow ah oo fiidiyoow sareeya.
Amazon iyo Google ayaa hoos u dhigay qiimaha kuwa ku hadla caqligooda
Sida ay qabaan qaar ka mid ah falanqeeyayaasha, Google iyo Amazon labaduba waxay hoos u dhigeen qiimaha kuhadalkooda kuwa caqliga badan kahor imaatinka HomePod, sidaas darteed waxay muujinayaan in noqoshada falanqeeye ay tahay shaqo aan ubaahneyn aqoon weyn, uguyaraan ma muujiyaan sida ay tahay kiiskan
Shiinaha oo tartan ugu jira inuu noqdo dalka ugu muhiimsan adduunka ayaa hada ku dhawaaqay cashuur dhaafka shirkadaha ajaanibta ah ee doonaya inay maalgashadaan wadanka.
Samsung Galaxy S9 wuxuu tilmaami doonaa kamaradda laba-geesoodka ah ee taagan
Qaar badan oo ka mid ah dadka isticmaala Apple ayaa ku qanacsan in kamaradda dambe ee labada gees leh ay fiican tahay ...
Google ayaa ka furi doonta dukaamo u gaar ah dalka Hindiya si kor loogu qaado iibinta Google Pixel 2
Google waxay dooneysaa Google Pixel 2 inuu noqdo bedel kale oo Hindiya ah, waxayna dooneysaa inay dukaamo u gaar ah ka furato dalka inta lagu jiro sanadka soo socda.
Samsung waxay bilaabi laheyd afhayeenkeeda Bixby qeybtii hore ee 2018
Way cadahay in Apple's HomePod uu lahaan doono tartamayaal badan, dhab ahaantii afhayeenka ragga ...
Tartameyaasha iPhone X horeyba waa "foornada." Samsung Galaxy S9 ayaa bilaabeysa inay soo daadato
Waana in toddobaadyadaan macluumaad nooc kasta leh ay ka imaanayaan aaladda cusub ama halkii, aalado cusub ...
Telefoonkii ugu horreeyay ee Shiinuhu leeyahay ee haysta iPhone X waa Leagoo S9
Shirkadda Shiinaha ee Leagoo ayaa si cad u dhiirrigelisay iPhone X, si ay u qaabeeyaan xarunteeda xigta, Leagoo S9.
weMessage waxay iMessages geynaysaa mobilada Android
Ma rabtaa inaad ka hesho farriimaha iMesaage mobilkaaga Android? Haddii aad haysatid kumbuyuutar Mac ah waad isku dayi kartaa inaad isticmaasho weMessage
Samsung waxay ku sharraxeysaa qalabka 'iris scanner' ka hor aqoonsiga wajiga
Samsung waxay ka tagi doontaa aqoonsiga wajiga iyadoo loo rogi doono qalabka 'iris scanner' qalabkeeda cusub ee la soo bandhigay sanadkan
Dhibaatooyinka waxay kusii socdaan Google Pixel 2 XL: ku guuldareysiga qaabka sawirka iyo duubista maqalka oo liita
Waxayna u muuqataa in Google uusan madaxiisa kor ugu qaadin Google Pixel 2 iyo si gaar ah qaabka ...
Dhowr cutub oo ka mid ah Google Pixel 2 XL ayaa dhibaato ka haysata "saamaynta gubashada" shaashadda
Ugu horreyntii, ka dig in tani ay u muuqato inay tahay dhibaato gaar ah qalab taxane ah oo adeegsadayaasha qaar ay leeyihiin ...
Isbarbardhiga iska caabbinta dhicitaanka inta udhaxeysa iPhone 8 Plus iyo Google Pixel 2 XL
Fiidiyowga soo socda, waxaan ku tusineynaa haddii iPhone 8 Plus ama Google Pixel 2 XL ay u adkeysanayaan inay dhacaan
Samsung waxay soo bandhigaysaa Bixby 2.0 oo ku wajahan aaladaha casriga ah
Shirkadda Kuuriyaanka ah ee Samsung ayaa bilawday inay qaado tillaabooyinkeedii ugu horreeyay ee xagga maaraynta guryaha caqliga badan ee Bixby 2.0
Soo saaraha qalabka ciyaaraha Razer ayaa soo bandhigi doona taleefan casri ah Noofambar 1
Soo saaraha qalabka ciyaaraha, Razer, ayaa ku dhawaaqay in bisha Nofeembar 1 ay soo saari doonto wax soo saar cusub, oo laga yaabo inay tahay casriga
Google Home Mini waxaa dhaqaajin kara kaliya amarrada codka
Kaaliyaha cusub ee Google ma awoodin inuu ku gaaro suuqa si ka xun, tan iyo markii badhanka kaaliyaha had iyo jeer la hawlgeliyo
Thanks to codsigan Android, waxaan u isticmaali karnaa Google Assistant barnaamijkeena Apple AirPdos
Microsoft waxay xaqiijineysaa in Windows 10 Mobile Mobile uu dhintay
Microsoft waxay si rasmi ah u xaqiijisay inay joojineyso taageerida Windows 10 Mobile, iyadoo gebi ahaanba ka tagaysa moobilkeeda mobilada.
Microsoft waxay sii deyneysaa nooca LTE ee Surface Pro bisha Diseembar
Microsfot waxay qorsheyneysaa inay Surface Pro cusub la gasho isku xirka LTE iibinta bisha Disembar ee soo socota si ay ula tartanto iPad Pro LTE